I-Lakeside Cabin #2 e-Fisherwaters Resort
Siyakwamukela ku-Fisherwaters Resort; indawo ekhethekile lapho uzobuyela khona ngesikhathi uye kwenye yezindawo zokugcina zokungcebeleka zikaMama ne-Pop e-Lake of the Ozarks. Itholakala ku-10 MM we-Niangua Arm, uzojabulela ukuthula nokuthula endaweni enehlathi enokubukwa okumangalisayo kwechibi. I-Cabin 2 yindawo yesitudiyo enegumbi lezivakashi ezi-4. Indawo ihlanganisa umbhede wendlovukazi, ikhishi le-galley, ukugeza okugcwele, usofa wendlovukazi nompheme omboziwe. Ungajabulela impelasonto emnandi noma uhlale isikhathi eside kulesi sandla esakhiwe, esisodwa sekhabethe elinomusa.
I-Fisherwaters Resort inedokodo elihle lokudoba elinamachweba amabili axhunywe endaweni yesikebhe enkulu eneziliphu ezingu-10'x20'. Ezinye izinsiza zihlanganisa irempu yesikebhe, inkundla yokubhukuda, amatafula epikiniki, imigodi yomlilo, ingadi yoqalo, ukwakheka kwamatshe emvelo okuhle kanye nezitezi zamatshe ezakhiwe ngesandla. Leli khabethe linendawo yokugezela entsha elungiswe kabusha kusukela ngoSepthemba 2019! Ikhabhinethi yesi-2 ifakwe i-Weber Grill, ifriji elingana nosayizi ogcwele, i-microwave kanye nebanga/uhhavini wegesi yezimbawula ezine. Ikhishi lihlanganisa nebhodwe lekhofi, i-toaster, i-cookware evamile, izitsha nezitsha. Amathawula namalineni nawo ahlinzekwa. Indawo yethu AYInayo i-WIFI, ikhebula noma isathelayithi. Ikhabethe linayo i-TV entsha enesidlali se-Blu-ray/DVD nama-DVD ongawaboleka uma uwacela. Isevisi yeselula inebala kwezinye izinkampani zenethiwekhi. Jabulela ukuthula kanye nale ndawo eseceleni ngenkathi uxhuma nemvelo kanye nabathandekayo bakho.
4.90(86 okushiwo abanye)
Ukushayela imizuzu eyi-10 ukuya eCamdenton, imizuzu engama-30 ukuya e-Osage Beach kanye ne "The Strip". Imizuzu engama-20 ukuya eBig Surf Water Park. Ngokuqondile ngaphesheya kwechibi ukusuka ku-Bridal Cave futhi uzungeze ekhoneni ukusuka e-Ha Ha Tonka State Park. I-Old Kinderhook Golf Club kanye neLake Valley Golf Club ziphezulu egqumeni.
Cishe njalo kukhona othile esizeni ozokusiza wena nomndeni wakho. Ngesikhathi sentwasahlobo, ekwindla kanye nezinkathi zasehlobo I-Fisherwaters inomuntu okungenani oyedwa eKhabhini Lomnikazi isikhathi esigcwele.
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$1000.